अक्टोबर 7, 2019 अक्टोबर 7, 2019 साइन्स इन्फोटेक	9 Comments उपचार, बाथ रोग
धेरैजसो जोर्नी दुख्ने रोगलाई बाथ भन्ने चलन छ । यो रोगको सहि उपचार नहुनाले मानिस पिडा सहेर बस्न बाध्य भएका छन् । आज मैले बाथ रोगको सफल उपचार बारे प्रकाश पार्नेछु । के बाथ रोग जोर्नीको दुखाईलाई मात्र भनिन्छ त ? बाथ रोग किन हुन्छ ? बाथ रोगका लक्षणहरु के-के हुन् ? कसले र कहाँ यसको उपचार गर्ने ? जस्ता जिज्ञासा सबैको मनमा उब्जिन्छ ।
बाथ रोग जोर्नी दुख्ने मात्र नभई अन्य रोगको लक्षणका रुपमा पनि देखा पर्छ । कहिलेकाहीँ एक्लो रोगका रुपमा पनि बाथरोग देखा पर्न सक्छ भने कहिलेकाँही अन्य रोगसँग मिसिएर पनि देखिन्छ । बाथ रोग नसर्ने प्रकृतिको दीर्घ रोग हो। यो रोगको औषधि बाँचुन्जेल सेवन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
धेरैजसो बाथरोग औषधि सेवन गरुन्जेल निको भएजस्तो हुने तर औषधि सेवन गर्न छाडेपछि फेरि बल्झने खालका हुन्छन् । समयमा उपचार नपाउँदा बाथरोग मृत्युको कारण पनि बन्न सक्छ । साधारणतया बाथरोगहरु रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली (इम्युन सिस्टम) का कारण हुन्छन्।
बिहान उठ्ने बित्तिकै कक्रक्क परेर हलचल गर्न समेत गाह्रो हुन्छ । केहीबेर तन्काएपछि र काम तथा कसरत गर्न थालेपछि मात्र दुखाइ कम हुन्छ । यस किसिमका दुखाइमा काम, कसरत र दुखाई कम गर्ने औषधि सेवन गरेपछि बिरामीले राहत महसुस गर्छन् । बाथरोगको समयमै निदान, निरुपण र उपचार नभएमा रोग जटिल अवस्थामा पुग्छ र बिरामी चलमल गर्न नसक्ने भएर थला पर्छन् ।
यस्ता रोगको उपचार गर्दा गर्दा ठिक नएका अनेकौं रोगी हामीले देखेका छौं । यो रोग दिर्घकालिन रोगको रूपमा हेरेको पाइन्छ । लाखौं खर्चेर पनि ठिक नहुनु दुखको कुरा हो । एलोपैथिकमा यस्को उपचार भएको तर क्षणिक ठिक भएपनि पछि औषधि खान छोडेपछि पुन भएको देखिन्छ । यस्ता रोगको उपचार यो औषधिबाट गर्नुभएमा सन्चो हुनेछ ।
१. छायामा सुकाएको हर्रो २५० ग्राम,सिधेनु २५० ग्राम,गाइको घिउ जम्मा गर्नुहोस् । सुकाएको हर्रोलाई मसिनो गरी पिस्नुहोस् । पहिले घिउलाई तताउनुहोस् । तातेको घीउमा माथिको दुवै औषधि राखेर पकाउनुस । हलुवा जस्तो भएपछि उतारेर राख्नुहोस् ।
मात्रा : ६ ग्राम जति विहान बेलुका खान दिनुस हल्का पेट सफा हुदै जान्छ । यो औषधि अनुभुत योगबाट लिइएको छ ।
नोट: समस्या जटिल भएमा यो औषधि ले ढिलो हुन सक्छ । हर्रोलाई फलामको भाडामा नपकाउने नकुट्ने भनेको छ ।
← आज नवरात्रको नवौ दिन महानवमी मनाइँदै
रूघा र यसको प्रभावकारी उपचार →
डिसेम्बर 18, 2019 डिसेम्बर 18, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
9 thoughts on “बाथ रोग र यसको उपचार”
Pingback:यस्तो छ रूघा र यसको प्रभावकारी उपचार, थाहा पाईराख्नुहोस्
Pingback:वाथ, जोर्नी दुख्ने समस्याको सफल उपचार
Pingback:पायल्सको होम्योपैथिक र तान्त्रीक उपचार
Pingback:महिला र युवतीले गर्भपतन होइन आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्नुपर्छ
Pingback:छाती किन दुख्छ ? यस्तो छ यसको घरेलु उपचार
Pingback:यस्तो छ माघे सङ्क्रान्ति र यसको महत्व
Pingback:भिटामिन के (Vitamin K) को कमीले हुन सक्छ रक्तस्राव
Pingback:आयुर्वेदको भविष्य हुदैछ उज्ज्वल